Thu, Jun 4, 2020 at 8:38pm
फेसबुकले न्युज ट्याब ल्याउँदै, के हो न्युज ट्याब ?
काठमाडौँ, २६ साउन फेसबुकले पठनीय सामाग्री मात्र प्रकाशित गर्नका लागि यसैवर्ष न्युज ट्याब फिचर ल्याउने भएको छ । सीएनइटीका अनुसार विश्वलाई समाचार र सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नका लागि फेसबुकले न्युज ट्याब ल्याउन लागेको हो । फेसबुकले आफ्नो न्युज ट्याबमा गुणस्तरीय समाचार तथा समाग्री प्रदान गर्नका लागि एबीसी न्युज तथा वासिङ्टन पोस्टजस्ता विश्वसनीय संचारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेको द वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको..
गूगलको एन्ड्रोइडलाई टक्कर दिदै हुवावेले सार्वजनिक गर्‍याे ‘हार्मोनी ओएस’
काठमाडौँ, २५ साउन हुवावे टेक्नोलोजीले शुक्रबार ‘हार्मोनी ओएस’ नामक अपरेटिङ प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ । हुवावले हामोनी ओएस सार्वजनिक गरेसँगै यसले एन्ड्रोइडलाई टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै अपरेटिङ सिस्टमका लागि अमेरिकी प्रविधिमा रहेको निर्भरता पनि घट्ने बताइएको छ । हार्मोनी ओएस सार्वजनिक गर्दै हुवावेका कन्जुमर बिजनेसतर्फका सीईओ रिचडए यूले यो अपरेटिङ सिस्टममा स्मार्ट स्पिकर भएको बताए । सीईओ यूका..
म्हैपी क्षेत्र वरपर ३३ सिसी क्यामरा जडान
काठमाडौँ, २५ साउन काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ म्हैपी मन्दिर वरपरको क्षेत्रमा ३३ सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ । प्रदेश–३ सरकारको रु ५० लाख आर्थिक सहयोगमा म्हैपी मन्दिर परिसरभित्र शौचालय तथा म्हैपी क्षेत्र वरपरका ३३ मुख्य मुख्य चोकमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको हो । सिसी क्यामरा तथा नवनिर्मित शौचालयको आज म्हैपी मन्दिर परिसरमा एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा महानगरपालिका..
प्रदेश १ मा चार दिनदेखि एनटिसी सेवा अवरुद्ध, सञ्चारविहीन बने सेवाग्राही
ओखलढुंगा, २५ साउन । चार दिनदेखि प्रदेश १ काे ओखलढुंगासहित तीन जिल्लामा एनटिसी सेवा अवरुद्ध भएको छ। बुधबार राति १२ बजेबाट ओखलढुंग, सोलुखुम्बु र खोटाङमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल, ल्याण्डलाइन टेलिफोन तथा एडिएसएल सेवा अवरुद्ध भएको हो। उदयपुरको चित्रेमा रहेको टावरमा जडान गरिएको रेडियो लिंकको छाता हावाहुरीले अन्यन्त्र बंग्याएपछि सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल टेलिकम ओखलढुंगाका प्रमुख बच्चुराम खतिवडाले बताए । राजविराजमा रहेको टावरसँग लिंक गराएर चित्रे टावरमार्फत..
काठमाडौँ, २४ साउन बस्तुशास्त्र अनुसार घरको सब भन्दा मुख्य भाग भनेको भान्छाघर हो । घरमा हुने बिमारी र समस्याका कारण किचेनसंग जोडिएको वास्तुदोष हुन् सक्छ। तपाई कुन दिशामा फर्किएर खाना बनाउनुहुन्छ र कता फर्केर खानु हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। यदि वास्तुशास्त्रसंग जोडिएको यी कुरालाई ध्यान दिएमा वास्तुदोषबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। उत्तर दिशा तर्फ फर्किएर खाना पकाउनाले व्यवसाय घाटामा जान सक्छ । साथै..
ललितपुरमा पनि अब दैनिक यान्त्रिक कुचो सञ्चालन
ललितपुर, २४ साउन । ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य सडकमा अब दैनिक एक घण्टा ब्रुमर (यान्त्रिक कुचो) सञ्चालन हुने भएको छ । हिलो र धुलोमुक्त महानगर बनाउने अभियानअनुरुप ललितपुरमा आज दुई ब्रुमर र दुई पानी ट्याङ्करको उद्घाटन महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ललितपुरको मुख्य सडक थापाथली पुलदेखि सातदोबाटोसम्म दैनिक एक घण्टा ब्रुमरले सडक सफा गर्नेछ । यी ब्रुमर ललितपुरका अन्य मुख्य सडक..
रोकिएन उपभोक्ताको डाटा चोरी, प्रयोगकर्ताको भ्वाइस प्राइभेसीको दुरुपयोग बढ्दो
काठमाडौँ, २४ साउन प्रविधि विकासका क्रममा कहिले फेसबुक र कहिले गुगलले उपभोक्ताको डाटाको दुरुपयोग गरिरहेको गुनासो आइरहँदा यस्ता कम्पनीका सूची बढ्न थालेका छन् । उपभोक्ताले स्मार्टफोन वा अन्य डिभाइसबाट प्रयोग गर्ने तथ्यांक मात्र नभई कुराकानी समेत गोप्य नरहने गरेको पाइएको छ । चर्चित सामाजिक संजाल ट्वीटरको डाटा दुरुपयोग भएको र अर्को चर्चित भिडियो च्याट एप स्काइपमा बोलिएको बार्तालाप नै कम्पनीले सुन्ने गरेको..
अब कम र्याम भएको मोबाइलमा पनि पब्जी खेल्न सकिने
काठमाडौँ, २३ साउन विश्वमा लोकप्रिय गेम ‘पब्जी मोबाइल लाइट’भारतमा लन्च गरिएको छ । पब्जी मोबाइल लाइट गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । पब्जीले लाइट भर्सन सार्वजनिक गरे सँगै कम र्याम भएका मोबाइलमा पनि अब यो गेम सजिलै खेल्न सकिने छ । लाइट भर्सनमा ६० खेलाडीले खेल्न सक्छन । भने यो लाइट भर्सनको ४०० एमबीको रहेको छ । लाइट भर्सन अहिले भारतमा..
अब भूकम्प आउनुअघि नै ‘साइरन’
काठमाडौँ, २३ साउन । बाँकेको कोहलपुर र बैजनाथ गाउँपालिकामा भूकम्पको पूर्वसूचना दिने ‘सेन्सर’ जडान गरिएको छ । नेशनल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी सेन्टर फर डिजास्टर रिडक्सन (एनसीडीआर), ताइवानको सहयोगमा कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा ६÷६ वटा सेन्सर जडान गरिएको छ । बाँकेमा जडान गरिएको भूकम्पको पूर्वसूचना दिने सेन्सर नेपालमै पहिलो हो । एनसीडीआर, ताइवानका निर्देशक डा. होङ चेङले सेन्सरले भूकम्प जानु भन्दा ५० सेकेन्ड..
घोषणाको ५ महिनापछि एप्पलको क्रेडिट कार्ड सार्वजनिक
काठमाडौँ, २२ साउन अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी एप्पले घोषणा गरेको पाँच महिनापछि एप्पल क्रेडिट कार्ड सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई एप्पल कार्ड भनिएको छ। हाल यस एप्पल क्रेडिट कार्ड सबै माझ उपलब्ध हुन सकेको छैन। एप्पलले हाललाई सीमित व्यक्तिलाई मात्र सूचना प्रदान गरेर यस कार्ड प्रदान गरिरहेको छ। आगामी महिना सबैले एप्पल कार्ड लिनसक्ने कम्पनीको भनाइ छ। आइफोन प्रयोगकर्ताले मात्र यस कार्ड प्रयोग..
काठमाडौँ, २१ साउन तपाईं स्मार्टफोन तातेर हैरान हुनु भएको होला । धेरै बेर मोबाइल चलाउँदा भिडियोहरु हेर्दा वा इन्टरनेट चलाउँदा मोबाइल तात्ने गरेको छ भने कहिलेकाँहि यत्तिकै पनि मोबाइल तातिरहेको हुन्छ । फोन तातो भएका कारण तपाईले केही बेर मोबाइल अफ पनि गर्नु भएको होला । केहीले त मोबाइलमा थप केही समस्या आयोकी भनेर मोबाइल बनाउने स्थानमा समेत मोबाइल लाने गर्नु भएको..
न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई मोबाइल बन्द गर्न पाटनका न्यायाधीशको निर्देशन
काठमाडौँ, २१ साउन उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले मुद्दाको ‘कजलिष्ट’ प्रकाशित भएपछि न्यायाधीश तथा कर्मचारीले मोबाइल बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उच्च अदालत तुल्सिपुरबाट उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीशमा सरुवा भएर आएपछि अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुले कजलिष्ट निस्केपछि मोबाइल बन्द गर्न उहाँले आज निर्देशन दिनुभएको हो । देशैभरका अदालतहरुमा कजलिष्ट निस्केपछि न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुका मोबाइलका घण्टी बज्ने गरेको आरोप लागिरहेका..
करोडौँ पटक डाउनलोड भए नक्कली तथा खतरनाक एपहरु
काठमाडौँ, २१ साउन नक्कली तथा खतरनाक एपहरुविरुद्ध गुगलले लगातार कदम चालिरहेको छ । तथापि यस्ता एपहरु प्ले स्टोरबाट पूर्णरुपमा हटाउने मामिलामा गुगल सफल भैसकेको छैन । हरेक महिना एउटा न एउटा यस्तो खाले रिपोर्ट सार्वजनिक हुन्छ कि त्यसबाट थाहा हुन्छ फर्जी तथा हानी पूराउने खालका यी एपहरुको संख्या कति बढ्दैछ । eSET का मालवेयर अनुसन्धानकर्ता लुकास स्टेफेन्कोका अुनसार जुलाई महिनामा मात्रै गुगल प्ले..
सावधान ! फेसबुक म्यासेञ्जरमा अश्लिल भिडियो आउँछ ?
काठमाडौं। फेसबुक म्यासेञ्जरमा आएको के त्यो भिडियो तपाइको हो ? भन्ने म्यासेजले फेसबुक प्रयोगकर्तालाई हैरानी बनाएको छ। यसरी हैरानी भएको र आफूले कुनै पनि भिडियो म्यासेञ्जरमा नपठाएको भन्दै स्टाटस पोष्टसमेत गरिरहेका छन्। यसलाई खोल्दा ह्याकरहरुले सबै डाटाबेस कलेक्सन गरेर पछि फेसबुकमा नै समस्या आउने गरेको प्रविधिमा जानकार भानुभक्त थपलियाको भनाइ छ। प्राध्यापक, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मी लगायत सामाजिक अगुवाहरुले यो सबै स्पाम हो,..
अर्को हप्ता एक विशाल ऐस्टेरायड पृथ्वीको नजिक भएर गुज्रने नासाको भनाई
काठमाडौँ, १८ साउन अगष्ट १० मा क्षुद्रग्रह पृथ्वीको अत्यन्त नजिक आउदैंछ । नासाका अनुसार क्षुद्रग्रहको व्यास १८७० फिट छ । यो सामान्यताभन्दा ठूलो आकारको क्षुद्रग्रहमा पर्ने वैज्ञानिकले बताएका छन् । तर यसले पृथ्वीलाई कुनै खतरा नपु¥याउने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । नासाको ग्रह प्रतिरक्षा समन्वय कार्यालयमा कार्यरत लिण्डले जोनसन र केली फास्टका अनुसार यो क्षुद्रग्रहको परिपथ पृथ्वीतर्फ नभएकाले डराउनुपर्ने अवस्था छैन । जोनसन र..
सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौँ, १७ साउन इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आवश्यक ज्ञानको अभावमा विभिन्न अपराधका घटना समेत हुँदै आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई विभिन्न कुरामा सचेत रहन आग्रह गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय समाजिक सञ्जाल के–कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा साइबर क्राइमका घटनासँगै मुद्दा समेत दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरनेट र सामाजिक..
काठमाडाैं, १७ साउन । देशभरका एक हजार सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला बन्ने भएकाे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका एक हजार सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला बनाइदिने भएको हाे। यसका लागि आपूर्तिकर्ता पनि छनौट भइसकेको छ। प्राधिकरणले यसका लागि ९ सय ३० विद्यालयमा यस्तो प्रयोगशाला बनाउनका लागि ३ अर्ब ४७ करोड खर्च गर्ने भएको छ। यो कामका लागि प्राधिकरणले निकालेको टेन्डरबाट सबैभन्दा..
घोराही, १७ साउन । दाङ देउखुरीका विभिन्न सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत धमाधम पुराना रूख काटिए । अझै कतिपय सामुदायिक वनमा त झाडी सफाइको नाममा साना रुख पनि बाँकी छैनन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले एकातिर फाइदा पुर्याए पनि अर्कोतर्फ नोक्सान भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । लमही नगरपालिका–७ निवासी प्रकाश चौधरीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले नोक्सानसँगै थप समस्या सिर्जना गरेको बताउनुहुन्छ । “हाम्रो..
एजेन्सी, १६ साउन । २००६ मा पृथ्वीको नजिकै भएर गएको उक्त ‘एस्टेरायड’ २०१९ मा फेरी एकपटक पृथ्वीको नजिकै हुँदै सूर्यको परिक्रमा गर्ने क्रममा छ । सौर्यमण्डलमा रहेको मंगल ग्रह र वृहस्पति ग्रहकाे आकाशिय दूरीकाे बीचमा एउटा बेल्ट छ, जसलाई वैज्ञानिकहरुले ‘एस्टेरायड बेल्ट’ नामाकरण गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा एक मिटरदेखि दश लाख मिटरसम्मको डायमिटर भएका लाखौँ खगोलिय पिण्डहरु छन् । जसलाई खगोल वैज्ञानिकहरुले..
प्लुटोलाई पुन: ग्रहको मान्यता
काठमाडौँ, १६ साउन सन् २००६ सालमा ग्रह नमान्ने घोषणा गरिएको प्लुटोले फेरि ग्रहकै मान्यता र दर्जा पाएको छ । ब्रह्माण्डका वस्तुको वर्गीकरणको जिम्मेवार संस्था इन्टरनेसनल एष्ट्रोनोमिकल युनियन (आएयु)ले भर्खरै प्लुटोलाई एक मुख्य ग्रहको रुपमा वर्गीकृत भएको घोषणा गरेको हो । हाम्रो सौर्यमण्डलको नवौं ग्रहको रुपमा लामो समयदेखि स्थापित र मानिँदै आएको यो ग्रहले मर्करी, भेनस, पृथ्वी, मंगल, जुपीटर, स्याटर्न, युरानास, नेप्ट्युन र प्लानेट–एक्सले..
स्ट्राटेजिक एनालिटिक्स रिपोर्ट : यी हुन् विश्व स्मार्टफोन बजारका टप टेन कम्पनी
काठमाडौँ, १६ साउन सन् २०१९ को दोस्रो त्रैमासिकमा पनि विश्व बजारमा स्मार्टफोनको बिक्रीमा गिरावटले निरन्तरता पाएको छ । विश्व स्मार्टफोन बजारको गिरावटका बाबजुत सामसुङ र हुवावेले भने स्मार्टफोनको बिक्री तथा बजार हिस्साको मामिलामा वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएका छन् । स्ट्राटेजिक एनालिटिक्सका अनुसार विश्व स्मार्टफोन बजारमा यस त्रैमासिकमा स्मार्टफोनको बिक्रीमा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको छ जबकि सामसुङका स्मार्टफोनको बिक्रीमा भने..
काठमाडौँ, १५ साउन नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै मुलुकमा अपराधको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको बताएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया’मा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै विभिन्न आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको बताइएको हो । कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले सामाजिक विकृति र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै अपराध बढेको..
काठमाडौँ, १५ साउन विश्वभर पट्याउन मिल्ने किसिमको स्मार्टफोनको चर्चा चलिरहदा आगामी दिनमा यस किसिमको स्मार्टफोनको संख्या व्यापक मात्रामा बढ्नसक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । सामसुङ र हुवावेईले यसअघि नै पट्याउन मिल्ने किसिमको स्मार्टफोन सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, उनीहरुको यस किसिमको स्मार्टफोन बजारमा ल्याउन अझै केही समय बाँकी छ । यस्तोमा स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी रोयोलले आफ्नो फ्लेक्जिबल डिस्प्ले भएको स्मार्टफोन फ्लेक्सपाई बिक्रीको..
काठमाडौँ, १४ साउन अत्यन्त लोकप्रिय एप टिकटकको निर्माता बाइट–डान्सले मोबाइल निर्माणको व्यवसाय सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । टिकटक पछिल्लो समय सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको समाजिक सञ्जाल एप हो । हाल यसमा ५० करोड नियमित प्रयोगकर्ता छन् । विश्वभरी टिकटक एक अर्ब पटक डाउनलोड गरिएको विश्वास गरिएको छ । एपमा प्रयोगकर्ताले १५ सेकेण्डसम्मको भिडियो पोष्ट गर्न सक्छन् । टिकटक निर्माता बाइट–डान्सले मोबाइल..
एप्पलका ३ फाइभजी आईफोन बजारमा
काठमाडौं, १४ साउन । सन् २०२० सम्ममा एप्पलका ३ फाइभजी आईफोन बजारमा आउने भएका छन् । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले सन् २०२० मा तीनवटा फाइभजी आईफोन ल्याउने भएको हाे । यसअघि एप्पलले सन् २०२१ भन्दा अघि फाइभजी आईफोन नल्याउने समाचार बाहिरीएकाे थयाे । त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो क्वालकोमसँगको विवाद सुल्झाएको छ । बजार विश्लेषकका अनुसार सन् २०२० मा एप्पलले आफ्ना तीनओटा आईफोन फाइभजी कनेक्टिभिटीको साथमा सार्वजनिक..
ट्वीटरको नयाँ डिजाइन मन परेन ? यसरी पाउनुस् पुरानै लुक्स
काठमाडौँ, १३ साउन ट्वीटरले हालै आफ्नो वेबसाइट तथा मोबाइल एपको युजर इन्टरफेस तथा डिजाइनमा केही परिवर्तत गरेको छ ट्वीटरको परिवर्तित नयाँ डिजाइन कतिपय प्रयोगकर्ताले मन पराए त कतिपयले आफूलाई पुरानै लुक्स मन परेको बताइरहेका छन् । यदि तपाईं पनि ट्वीटरको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र पुरानो ट्वीटर डिजाइन मिस गरिरहनु भएको छ भने पुरानै डिजाइन फिर्ता पाउने एउटा तरिका छ । ट्वीटर प्रयोगकर्ता तथा सफ्टवेयर..
जापानको सोनी कम्पनीले बनायो मोबाइलभन्दा पनि सानो एसी [भिडियोसहित]
एजेन्सी, १२ साउन । जापानको विश्व चर्चित कम्पनी सोनीले मोबाइलभन्दा पनि सानो आकारको एसी (एयर कन्डिशनर) बनाएको छ । यो स्मार्ट एसीमा लिथियम आयोन ब्याट्री लगाइएको छ । जसलाइ २ घण्टा चार्ज गरेपछि दिनभरी चलाउन सकिन्छ । यो एयर कन्डिशनर ब्लूटुथ ५.० एलइ कनेक्टे फोनमा समेत सपोर्ट गर्छ । विश्व चर्चित कम्पनी सोनीले उक्त एसी मानिसले लगाउने सर्टको लागि बनाएको बताएको छ । कम्पनीले..
एप्पलका पाटपूर्जामाथि कर छुट नगर्ने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौँ, ११ साउन अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्धले अमेरिकी दिग्गज कम्पनी एप्पल अप्ठेरोमा परेको छ । आफ्ना स्मार्टफोन तथा कम्प्युटरका पाटपूर्जाहरुमध्ये धेरै चीनमै उत्पादन गर्दै आएको एप्पलका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो घोषणा निकै टाउको दुखाईको विषय बन्ने देखिएको छ । चीनमा बन्ने एप्पलका म्याक प्रो कम्प्युटरका पाटपूर्जाहरु अमेरिकामा ल्याउँदा अमेरिकी सरकारले एप्पलमाथि कर तथा भन्सारमा कुनै सहुलियत नदिने राष्ट्रपति ट्रम्पले..
काठमाडौँ, १० साउन सरकारले भूमि व्यवस्थित गर्न अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय देशभर ‘ल्याण्ड रेकर्ड इन्फरमेसन सिष्टम (एलआरआइएमएस)’ सफ्ट्वेयर लागू गरेर भूमिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा लागेको हो । विसं २०७२ देखि शुरू गरिएको अनलाइन सेवा २०७४ सालसम्म २५ कार्यालयमा मात्र लागू भएकामा अहिले ७६ कार्यालयमा विस्तार गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका..
राष्ट्रिय चिन्हको अवमूल्यन हुनेगरी विज्ञापन गर्न नपाइने
काठमाडौँ, १० साउन राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, चिन्ह, निशाना छाप र विभूतिको अवमूल्यन हुनेगरी विज्ञापन बनाइ प्रकाशन एवं प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा जारी विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले यसअघि व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय गान, चिन्ह, निशाना छाप र विभूतिको प्रयोग गरेर विज्ञापन बनाउने विषयलाई भने हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘क्लिन फिड’..
Results 781: You are at page 8 of 27